DRC: 09 2019 သြဂုတ်လကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: 09 2019 သြဂုတ်လကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
Tele RELAY တစ်ခု9သြဂုတ်လ 2019
- သောကြာနေ့မှာကင်ရှာဆာထုတ်ဝေအဆိုပါစာနယ်ဇင်းအကြီးအကျယ်အစိုးရက၏အံ့ဆဲဆဲထုတ်ဝေ ပတ်သက်. ဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunga Ilunkamba န်းကျင်ညှိနှိုင်းမှုပြန်လည်ရောက်ရှိ။
၎င်း၏တစ်ဦးအဖြစ် AS ဖိုရမ် DES ဟာ: "အမျိုးသားညီလာခံ, သြဂုတ်လ 15 များအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်အထူးအစည်းအဝေး"။ အဆိုပါစက္ကူ "အရည်အချင်းပြည့်မီသောသတင်းရင်းမြစ်" Ilunkamba အစိုးရ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဒကောက်ကြောင်းဆွဲယူဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးမှသာရက်အနည်းငယ်ယူသင့်ကြောင်းညွှန်ပြကိုးကား။
"ဒီတူညီတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်ရက်အနည်းငယ်ကြာရှည်လိမ့်မည်ဟုဒီအထူး session ရဲ့ကျင်းပနိုင်ရန်များအတွက်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများလွှတ်ပေးရန်ဖို့အထွက်အစိုးရမှပေးထားခဲ့ဆိုကြသည်။ "
"အစိုးရ Ilunga: ဆက်လက်ကှဲထှကျအကြား"အဆိုပါဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုမှတ်တတ်သောခေါင်းစဉ်အလားအလာကအပေးအယူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ သူ့အစိုးရအစီအစဉ်ကို dictate လိမ့်မည်ဟု "ဒါဟာတူညီတဲ့အပေးအယူ။ ဖဲ Tshisekedi နှင့် FCC သည်စည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြောင်းဆက်လက်အားဖြင့်ထောက်ခံ Breaking အကြား, Ilunga Ilunkamba ဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ "
နေ့စဉ် task ကိုပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာ Sylvestre Ilunga များအတွက်လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေယုံကြည်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဆိုပါသတင်းစာပါလီမန်ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံ program ကိုqu'exécuteraအစိုးရ Ilunga Ilunkamba အပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
အနာဂတျသောစိတ်ကူးထောက်ခံပါသည်တစ်ဦးဓမ္မဆရာအမှုသုံးခုကိုအစိုးရက Ilunga အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှိရမည်။ အဆိုပါသတင်းစာဝန်ကြီးချုပ်များ၏ပဉ္စမစံနှုန်းကို decrypt (ကျား, မ၏အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ကိုယ်စားပြုမှုသေချာ) နှင့် Sylvestre Ilunga အမျိုးသမီးတွေသူ့အစိုးရအတွက်သိသိသာသာကိုယ်စားပြုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖှယျဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုဆိုသည်။
"ဒါကြောင့်အလားအလာခုနှစ်တွင်အစိုးရ၏ဦးခေါင်းကိုအမျိုးသမီးများနှင့်လူမျိုးကိုသမ္မတဖဲ Tshisekedi ဖြင့်ကတိကဝတ်နှင့်အညီဖြစ်ပြီး, ဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ယောသပ် Kabila ၎င်း၏ကွန်ဂရက်မှာ, ထိုစေလိုကြောင်း ဓမ္မပို့စ်များကိုအနည်းဆုံး 30% မိန်းမတို့အဘို့သိုထားနေကြတယ်။ "
ကွန်ဂို NEW လက်ဆောင် ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ကိပ်ပလက်ဖောင်း၏ "ဖြစ်ကောင်းဝန်ကြီး" (Cache)။ အဆိုပါ tri-အပတ်စဉ်အခြားသူများကို Boji ဖို့ဘတ်ဂျက်၏ဦးစီးဌာနမှာသူ Francois Mwamba, ရေအရင်းအမြစ်များအတွက်မစ္စတာ Baldwin Mayo အဘိဓါန်, ကနျြးမာရေးအတှကျအ Eteni Longondo, Gilbert Kankonde ပြည်ထဲရေး, လုံခြုံရေးနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းရေးရာ, အမျိုးသားစီးပွားရေးအတွက်သြဂတ် Kibasa Maliba, Aime Sangara ကြားတွင်ကိုးကား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။
CONGOLAISE ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အေဂျင်စီသတင်းများ အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ညှိနှိုင်းရေးလို့ခေါ်တဲ့အထူးပြုဝန်ဆောင်မှု (TLC) ၏သမ္မတကထူထောင်.
မစ္စတာ Jacques Kangudia Mutambayi ကို Justin Beda Sana နှင့် Jacques Kambala Tshilombo အသီးသီးနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတာဝန်ခံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ခံလက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါသည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာ agencier ကာကွယ်တားဆီးရေး, အသိပညာနဲ့ anti-တန်ဖိုးများကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအပါအဝင်အခြားမစ်ရှင်ရှိပါတယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အခြားကိစ္စများတွင်ထို CPA ဗာတီကန်မြောက်ပိုင်းကီဗူနှင့် Ituri များ၏ပြည်နယ်များအတွက်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆန့်ကျင်တုန့်ပြန်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက် 100 000 ယူရိုလှူဒါန်းခဲ့သည်ဟုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
(SNK / ဟုတ်ကဲ့)